गुमनाम गुर्जो घरघरमा: किन खाने, कति खाने र कसरी खाने ? Canada Nepal
क्यानाडानेपाल आश्विन ६ २०७७
आश्विन ६, २०७७ मंगलवार १९:२५:४७ बजे : प्रकाशित
दशैँमा ग्यास्ट्रिक रोगीले के खाने के नखाने ?
तनावका कारण पनि ग्याष्ट्रिके हुन्छ । ग्याष्ट्रिकका लक्षणहरू पेट फुलेको जस्तो लाग्ने, पेट दुख्ने, छाती र घाँटीमा पोल्न, दुख्ने, अमिलो डकार वा पानी आउनु ग्याष्ट्रिकको मुख्य लक्षण रहेको पाइन्छ । यसको अरु लक्षणहरुमा कहिलेकाहीँ बान्ता हुनु, कब्जियत हुनु, भुँडि ढाडिनु, टाउको दुख्नु पनि लक्षणहरु हुन् ।
ग्यास्ट्रिक साधारणतया सबैमा हुने समस्या हो । अधिकांस मानिसमा जोखिम हुँदैन । तर कहिले काहीँ यसको समयमा उपचार भएन वा ठूलो रुप लियो भने कुनै पनि अवस्थामा यसको असर पर्न सक्छ । जस्तो अल्सर हुने सक्छ यदि अल्सर फुट्यो भने कसै कसैमा रगत बग्ने, ब्लड प्रेसर लो हुने, दिशा कालो हुने हुन्छ । त्यहि अल्सर लामो समय सम्म उपचार भएन र ब्याक्टेरीयाहरु लामो समयसम्म पेटमा भयो भने पेटको क्यान्सर पनि हुने सम्भावना हुन्छ ।
उपचारमा धेरै बिरामीलाई साधारण किसिमको उपचार नै भए हुन्छ । कम पावरको औषधि एच टु ब्लकर भन्ने औषधिबाट नै सुरु हुन्छ । यदि त्यसले भ्याएन भने पिपि आइ भन्ने औषधि दिइन्छ ।
दशैंमा ग्यास्ट्रिक हुनेले कति खाने ?के खाने ? कसरी खाने दशैं आयो भन्दैमा जथाभावी चिल्लो, पिरो, अमिलो, मसलादार खाना नखाने । यदी खानै परेमा कम खाने । सकेसम्म मद्यपान, धुमपान नगर्ने । आफ्नो शरीरलाई नपच्ने खाना नखाने तथा ग्यास्ट्रिक समस्या हुनेले थोरै थोरै खाने तर खाइ रहने गर्नुपर्छ ।
कार्तिक ९, २०७७ आइतवार १५:५९:४६ बजे : प्रकाशित
दशैंमा मासु खाइसकेपछि मनतातो पानिको ५ आश्चर्यजनक फाइदा
काठमाडौँ। पानी एक प्राकृतिक औषधी हो र यसले विभिन्न रोगहरूलाई निर्मूल गर्न मद्दत गर्दछ। सामान्यतया मनतातो पानी भन्नाले न चिसो न तातो जसलाई सजिलै सँग मानिसले पिउन सक्छन् । यसले पाचन सुधार गर्नुका साथै, कब्जियतको समस्यालाई पनि निर्मूल गरी शरीर लाइ आराम महसुस गराउँदछ। त्यसै गरी मनतातो पानी जाडो मौसममा मात्र नभएर यो हरेक मौसमका लागी लाभदायक छ। अध्ययन अनुसार मनतातो पानीले केही हद सम्म शारीरिक दुखाइहरू समेतलाई कम गर्ने गर्दछ। दशैंमा मासु खाइ सकेपछि मनतातो पानि सेवन गर्दा हुन्छन् यस्ता फाइदा :
कार्तिक ९, २०७७ आइतवार १४:०४:३३ बजे : प्रकाशित
दशैंमा मासु पचाउने यी हुन् पाँच पेय पदार्थ
काठमाडौँ। बडादशैं नेपालीहरुको एउटा मुख्य सांस्कृतिक चाड हो । यस चाडको महिमा पूजाआजाका साथसाथै किनमेल, खानपिन,भेटघाट र मनोरञ्जनमा निहित छ । दशैंमा गरिने बिभिन्न सांस्कृतिक तथा सामाजीक कार्यहरूको कारण यो चाडलाई विश्वमै एक महत्वपुर्ण चाडको रूपमा लिने गरिन्छ ।
सामान्यतया खानालाई पाचन प्रणालीको प्रक्रियालाई २४ देखि ७२ घण्टा लाग्ने गर्दछ भने कस्तो प्रकारको खाना खाइएको छ, त्यसमा निर्भर हुने गर्दछ। साथै लैंगिक आधारमा पनि पाचन प्रक्रिया निर्धारण हुने गर्छ। एक अमेरिकी गैरसरकारी संस्था 'मायो क्लिनिक'अनुसार ठूलो आन्द्रामा खानाको औसत समय लिंगको आधारमा निर्धारण हुन्छ, महिलाको पेटमा ४७ घण्टा रहन्छ भने पुरुषको पेटमा ३३ घण्टा रहने गर्दछ।
कार्तिक ९, २०७७ आइतवार ११:००:५९ बजे : प्रकाशित
# मासु पचाउने
# पाँच पेय पदार्थ
लेमनग्रासका यी ५ फाइदा, थाहपाएपछि यसको सेवन अवश्य गर्नु हुनेछ
काठमाडौँ। लेमनग्रास गाउँ घरदेखि शहर सम्म पाइने एक महत्त्वपूर्ण वनस्पति हो। यसमा पाइने पोषक तत्वले शरीरको सम्पूर्ण स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक हुने गर्दछ। लेमनग्रास भिटामिन ए, बी, सी र फोलेटको राम्रो स्रोत हो। सानोतिनो शारीरिक समस्याको निदान खोज्न मात्र होइन, शरीरको रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन पनि लेमनग्रासको चिया नियमित पिउन सकिन्छ ।
यसमा पाइने पोटासियम, क्याल्सियम, म्याग्नीशियम र आइरनले शरीरको समग्र संयन्त्रलाई ठिक राख्दछ। लेमनग्रासमा एन्टिअक्सीडेन्ट, फिनोलिक यौगिकहरूले शरीरमा हुने थुप्रै रोगहरुलाई हटाउन औषधीको रूपमा काम गर्ने गर्दछ । यसको मुख्य तत्व भनेको कागती वा सिट्रस हो, जसमा एन्टिफंगल र एन्टि माइक्रोबियल गुणहरू हुन्छन्।
जानिराखौँ यसका ५ फाइदा
कोलस्ट्रोलः यसमा एन्टिहाइपरलिपिडेमिक र एन्टीहाइपरकोलेस्ट्रोलेमल गुणहरु पाइन्छ, जसले कोलेस्ट्रोलको स्तरलाई स्वस्थ राख्न सहयोग पु¥याउँछन्। एक अध्ययनका अनुसार दैनिक लेमनग्रासको सेवनले ट्राइग्लिसिसराइड्स स्तरलाई ठीक राख्दछ। यसैगरी, यसको सेवनले शरीरबाट एलडीएल (लो डेनिसिटी लिपोप्रोटीन) कोलेस्ट्रोलको शरीरबाट कम मद्दत गर्दछ।
डिटोक्सिफिकेसन वा शरीरबाट विषाक्त तत्वको निस्कासन : शरीरमा हुने डाइयुरेटिक गुणबाट हानिकारक विषाक्त पदार्थ निस्कासन गर्न सहयोग गर्दछ। यस्ता विषाक्त तत्व शरीरबाट निस्कासन भएपछि शरीरका अंगहरुले राम्रोसँग काम गर्दछ। लेमनग्रासमा हुने डाइयुरेटिक गुणका कारण पिसाब लाग्ने क्रम बढ्ने गर्दछ जसका कारण शरीरबाट विषाक्त पदार्थ पिसाबबाट बाहिर निस्किन्छ।
पेटको समस्याः एक अध्ययनका अनुसार, लेमनग्रासको एसेन्शियल ओइलमा एन्टिमाइक्रोबियल र एन्टि ब्याक्टेरियल गुण हुन्छ। जसले पेटमा हुने इन्फेक्शनबाट बचाउने गर्दछ। यसले पाचन तन्त्रको पनि सुधार गर्दछ र ग्यास्ट्रिक तथा अल्सरलाई रोकथाम गर्दछ।
अनुहारको छालाका लागि फाइदाजन : लेमनग्रासमा पाइने एन्टीसेप्टिक र एस्ट्रिन्जन्ट गुणको कारण यसले अनुहारको छाला स्वास्थ्य राख्ने काम गर्दछ। यदि कसैको अनुहारमा धेरै चिल्लो आउँछ भने यस्तो अवस्थामा लेमनग्रास निकै फाइदाकारी हुन्छ । साथै, यसले मुहारलाई पनि सफा र चम्किलो बनाउन मद्दत गर्दछा।
शरीरमा प्रतिरक्षा प्रणालीको सुधार : लेमनग्रासले पाचन, श्वासन, शरीरका तन्तुहरुलाई ठीक राख्न मद्दत गर्दछ। शरीरका लेमन ग्रासले शरीरका पोषक तत्वलाई अवशोषित गरि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतमा बढवा दिन्छ। शरीरमा हुने कोशीकाहरुको संयन्त्रलाई पनि ठिकमा राख्दछ।
कार्तिक ४, २०७७ मंगलवार २०:१५:१२ बजे : प्रकाशित
काठमाडौँ। रायोको साग सुन्ने वित्तिकै सायद हामी सबैको मुखमा पानी आउँछ। रायोको सागमा उच्च फाइबर हुन्छ, जसको कारण यसले पाचन प्रणाली ठीक राख्दछ। साथै यसमा पाइने अन्य खनिज, भिटामिन र प्रोटिनले समग्र स्वास्थ्यलाई लाभदायिक हुन्छ। यसमा कम क्यालोरी पाइन्छ, जसका कारण शरीरको तौल घटाउनका लागी महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ।
जानिराखौं रायोको सागका अन्य फाइदा
– रायोको सागमा भरपुर मात्रामा क्याल्सियम र पोटासियम पाइन्छ, जसले गर्दा मानिसको हड्डीलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ।
– भिटामिन के र ओमेगा ३ फ्याटी एसिडको पाइने हुँदा रायोको सागले एन्टिइन्फ्लेमेटरी प्रभावहरू पु¥याउँछ। यसलाई दैनिकरुपमा सेवन गर्दा क्यान्सर, मुटु रोग र हाडजोर्नीको समस्याबाट बचाउन मद्दत गर्छ ।
–रायोको सागमा प्रशस्तरुपमा पाइने फाइबरले गर्दा शरीरको पाचन प्रणालीलाई सुधार गर्नुका साथै यसले मेटाबोलिजमको दर बढाउँछ।
– रायोको सागमा एन्टिअक्सिडेन्ट तत्वहरु पाइन्छ, जस्तै भिटामिन, भिटामिन ए र भिटामिन सी। यस बाहेक रायोको सागमा भरपुर मात्रामा म्याग्निज र फोलेट पाइन्छ। त्यसैगरी यो भिटामिन ई, सी र एको राम्रो श्रोत हो, जसले रेडिकलहरू हटाउन मद्दत पु¥याउँछ। यसैगरी, यसले दम, मुटु रोग र रजोनिवृत्तिबाट पीडित भएका महिलाहरुका लागि फाइदा गर्दछ।
– रायोमा पाइने एन्टिअक्सिडेन्ट र एन्टिइन्फ्लेमेटरी गुणहरूले क्यान्सर जस्तो प्राणघातक रोगको जोखिम कम गर्दछ। अध्ययनकाअनुसार, यसले मूत्राशय, पेट, स्तन, फोक्सो, प्रोस्टेट र अण्डाशयको क्यान्सर रोक्न उपयोगी हुन्छ।
– रायोको सागमा उपस्थित एन्टिआक्सीडेन्टहरू र सल्फरले शरीरलाई डिटक्सिफिकेशन अर्थात् शरीरमा भएका विषाक्त निष्कासन गर्न मद्दत गर्दछ। जसले गर्दा, मुटु, फोक्सो र कलेजोलाई स्वास्थ्य राख्न सहयोग गर्दछ।
– रायोको सागले शरीरमा भएको ब्याड अर्थात् नराम्रो कोलेस्ट्रोलको स्तरलाई कम गरि मुटुको स्वास्थ्यलाई सकारात्मक प्रभाव पार्दछ। साथै, यसमा पाइने फोलेटले मुटु रोगको लागि जिम्मेवार होमोसिस्टीनलाई बढ्नबाट रोक्दछ।
– रायोको सागमा पाइने भिटामिन सीले इन्फ्लेमेटरी पदार्थ हिस्टामिनलाई बिच्छेद गर्न मद्दत गर्दछ। यस बाहेक म्याग्नेशियमले ब्रोन्कियल ट्युब र फोक्सोलाई राहत प्रदान गर्दछ।
–अध्ययनका अनुसार यस सागलाई दैनिक तीन पटक खाँदा यसले मानसिक स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्दछ। यसले ४० प्रतिशतसम्म मानसिक कम गर्न मद्दत गर्दछ।
– सुर्तिजन्य धुवाँ तथा पदार्थले शरीरमा भिटामिन एको कमि निम्त्याउने गर्दछ, जसका कारण इम्फिजेमा हुनेगर्दछ। यदि रायोको साग खाँदा फोक्सोमा भएका विषाक्त पदार्थलाई हटाइ स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ।
आश्विन ३०, २०७७ शुक्रवार १९:३९:४९ बजे : प्रकाशित
# रायोको साग
# १० चमात्कारी फाइदा
आश्विन २९, २०७७ बिहिवार १९:३५:१७ बजे : प्रकाशित
# तारेको लसुन
# यौन चाहना